पाचौ दिन - उसको लोग्ने र बिरालो (उपन्यास) - RabinsXP Blog
“म्याउ“ † म्याउ“ † म्याउ“ †” बिरालाको एकनासको आवाज कानमा परेपछि नीला पनि बिउ“झिएकी थिई । नीला बिउ“झिनुअघि नै आभास उठेर बिरालो भएठाउ“मा पुगिसकेको थियो । आभासले मर्करी बत्ती बालेको कारण कोठा झलमल्ल भएको थियो । नीलाका आ“खा पलङकै सिराननिर राखिएको घडीमा परेका थिए । बिहानको चार बजिसकेको थियो ।
“के भयो † मिलन राजालाई के भयो †” आभास बिरालो भए ठाउ“मा पुगेर उसलाई सधै“ झै“ छातीमा टा“सेर ड्ढकाउ“दै थियो । बिरालो पनि आमाका काखमा पुगेको रु“दारु“दैको बच्चोजस्तो भएर चुप लागेको थियो । आभासको छातीमा टा“सिएको बिरालोलाई देखेर आपूmमा पैदा भएको असहजपनलाई लुकाउ“दै नीलाले निदाएजस्तो गरेर आ“खा चिम्लिरही ।
केहीबेर छातीमा टा“सेर कोठामा यताउति डुलाएपछि आभासले बिरालोलाई पुनः उसैको पलङमा हालिदिको थियो । त्यसपछि ऊ बत्ती निभाएर आÏनो बिछ्यौनामा आएर सरक्क सुतेको थियो । एकैछिन पनि बितेको थिएन≤ पुनः बिरालो “म्याउ“म्याउ“” गर्न लाग्यो । आभास जुरुक्क उठ्यो, बत्ती बाल्यो, बिरालो बोक्यो र बत्ती निभाएर कोठाबाट बाहिर निस्क्यो ।
अब नीला बिछ्यौनामा र कोठामा समेत एक्लै भएकी थिई । “बिरालोलाई त्यसको कोठामा छोडेर आभास आउ“छ होला †” नीलाले यस्तै सोचेकी थिई र ऊ आभासको प्रतीक्षामा बसिरही, तर समय क्रमशः रित्तै बितिर≈यो ।
बिहान झलमल्ल घाम लाग्दासम्म पनि आभास नीला नजिक आएन । रातभरिजसो निदाउन नसकेको अवस्थाको आलस्य बोकेर भए पनि आज नीलाले अड्ढिस जानैपथ्र्यो । त्यसो त ड्ढोनमा सूचना गरेर पनि बिदा बढाउन नसकिने होइन । तर किन र कसका लागि बिदा लिने ? उसले मनमनै प्रश्न पनि गरी । अब उसले अड्ढिस नै जानुपर्छ । आÏनो निर्णयका कारण उसको शरीरमा केही मात्रामा स्पूmर्ति पनि आएको थियो ।
ऊ जुरुक्क उठी, नित्यकर्म सकी र कार्यालय जाने तयारीमा जुटी । नीला अड्ढिसका लागि रेडी भइसक्दा पनि आभासको नाकमुख उसले देखेकी थिइन । नीला बैठकमा पुगेर आभासको खोजी गर्न मात्र लागेकी थिई । त्यसै बेला मूल गेट खोलेको आवाज आयो । नीलाका आ“खा मूलद्वारमै पुगे । घरको मोटर आएको थियो । मङ्गलमान पनि आभासस“गै थियो ।
“हेरन नीला † यसलाई चेकअप गराउन डा.दत्तकहा“ पुगेर आएको । यसलाई भएको भाइरल इन्ड्ढेक्सनका कारण अझै एक हप्तासम्म औषधी खुवाउनुपर्छ भनेको छ ।” आभासले बडो चिन्तित भएर भनेको थियो । बिरालो छातीमा टा“सेर आÏना अगाडि आइपुगेको आभासका अनुहारमा नीलालाई हेर्न पनि मन लागेको थिएन । “म अड्ढिस जान लागेकी” नीलाले निराश आवाजमा आÏनाबारे जानकारी प्रस्तुत गरेकी थिई । “तिमीले बे्रकड्ढास्ट खायौ ? लन्च त अड्ढिसमै गछ्र्यौ होइन ?” आभासले पनि नीलाको जानकारी लिन खोजेको थियो । नीलाले आभासको पछिल्लो
प्रश्नका लागि टाउको हल्लाएर स्वीकृतिसूचक जवाड्ढ दिएकी थिई र आभासले आÏना दुवै प्रसङ्गको सकारात्मक जवाड्ढ पाएको ठहर गरेको थियो ।
आभासस“ग बिदा भएर नीला घरबाट पहिलोपल्ट अड्ढिसतिर भोकै लागेकी थिई । “नीला † तिमी अड्ढिसबाट चा“डो घर आऊ है † मलाई तिमी नहु“दा नरमाइलो लाग्छ ।” आभासले नीलालाई अड्ढिस पठाउने बेलामा अ“गालोमा राखेर भन्नेछ । यो नीलाको मीठो कल्पना थियो । आभास उसलाई अड्ढिस पु¥याउन पनि आड्ढै“ मोटर हा“केर आउला । आ“खाभरि विरहको उदासी बोकेर अड्ढिसको गेटमा उसलाई पु¥याउने आभासस“ग छुट्टिन नीलालाई पनि गाह्रो पर्ला । यस्तै अपेक्षा बोकेकी थिई नीलाले ।
“हेमराज † रानीसाहेबलाई अड्ढिस पु¥याएर आऊ” आभासले आÏनो ड्राइभरलाई अह्राएको थियो । त्यसपछि नीलालाई हात हल्लाएर बिदा गर्दै छातीमा बिरालो च्यापेर आभास घरभित्र पसेको थियो ।
मनमा अथाह वेदनाको भारी बोक्दै नीला हेमराजले हा“केको मोटरमा चढेर अड्ढिस पुगेकी थिई ।
“कस्तो भयो त हनिमुन ? तिमीले किन लामो बिदा नलिएकी मोरी † एकबारको जिन्दगीमा रमाइलो गरिहाल्नुपर्छ नीलु †” उर्मिलाले उत्ताउलि“दै भनेकी थिई । कसैलाई नडाकी, कुनै सुइ“को नदिई गरेको नीलाको बिहेको समाचार किल्किले नभएकी उर्मिलाका कारण अड्ढिसमा सनसनीपूर्ण समाचार भइसकेको रहेछ । “नीला जी, यस्तो त भएन नि † हामीलाई भोजै नखुवाई सुटुक्क आपूmमात्र रमाइलो गर्ने ?” अड्ढिसका सबै सहकर्मीहरूको एकैखाले भनाइ थियो ।
यस्तो बेला खुसी छचल्किएर कहा“ पोखू“ हुनुपर्ने नीला भने आपूmभित्र पीडा उमारेर आÏनै लागि दयनीय भएकी थिई । उसको दर्द कसैलाई बा“ड्न सकिने पनि थिएन । त्यसैले यस बेला नीलाले आÏना ओठमा जबर्जस्ती मुस्कान ड्ढैलाउनुबाहेक केही गर्नसकेकी थिइन ।
कार्यालयको काममा व्यस्त भएको समय नीलाका लागि आत्मपीडाबाट केही राहतको उपायझै“ भएको थियो । लन्चआवरमा भने ऊ पुनः साथीभाइहरूको ठट्टारमाइलोको केन्द्रविन्दु नै भएकी थिई ।
“नीलाको त रौनक नै भिन्नै भएछ नि †”
“नीलाजीलाई अब छोड्नुहुन्न≤ उहा“ले भोज खुवाउनै पर्छ ।”
“हाम्रो मिस्टर नीलाजीलाई पनि हेर्नुप¥यो नि †”
“नीलाजीको हनिमुन कता नि †”
“निकै धनी हुनुहुन्छ रे मिस्टर नीलाजी † हङकङ, बैङ्कक, सिङ्गापुरतिरै होला हनिमुन †”
“नीलाजी हामीलाई पनि सम्झनुस् है † बैङ्कक छिट्टै जानुभयो भने म पनि एकदुइटा सामान झिकाउ“छु≤ मस“ग डलर रेडी छ ।”
विभिन्न कुराहरू, मान्छेमान्छेका कुराकानीले नीलालाई यो आधाघण्टाको लन्चआवर घण्टौ“को भएजसरी बितेको थियो ।
“किन नीला तेरो अनुहार ज्यादै मलिन छ नि † आ“खा पनि रातभरि जागै बसेजस्ता छन् । यो आभासले¬” उर्मिलाले लन्च सकिएपछि एकान्त पारेर सोधेकी थिई । केही नजिक भएर उर्मिलाले गरेको प्रश्नले नीलाको मनको भित्री अंश छुनछुृन खोजेको थियो । तर आपूmलाई ज्यादै संयमित पार्ने क्रममा अलि कठोर हुन खोजेकी थिई ऊ “त्यस्तो केही होइन≤ टाउको दुखिरहेकाले पनि यस्तो भएको होला †”
“सिटामोल खान त” उर्मिलाले सहानुभूतिपूर्वक सल्लाह दिएकी थिई । “अघि नै खाइसके“” नीलाले अलि तर्कन खोज्दै भनेकी थिई ।
अड्ढिसमा बसुन्जेल बनावटी मुस्कान मुस्काउ“दा मुस्काउ“दै त्यस दिन उसको मुख नै थाकेको थियो । बल्लतल्ल अड्ढिस बिदा हुने बेला भएको थियो । “नीलाजीको त मोटर आइहाल्छ, हामीलाई पो बसको भीडमा घुस्रिनुपर्छ ।” एउटी सहकर्मीले ईष्र्याले ग्रस्त हु“दै नीलालाई हेरेर भनेकी थिई । नभन्दै छ बज्नासाथ अड्ढिस परिसरमा आभासको मोटर प्रवेश गरेको थियो । आआÏनो बाटो लाग्ने तरखरमा रहेका धेरैजसो सहकर्मीले त्यसबेला नीलालाई पुलुक्क हेर्दै मन्द मुस्कान पोखेका थिए ।
ड्राइभिङ्ग सीटमा आभास नै बसेको थियो । यसरी आभास नै मोटर लिएर आएको देख्नासाथ नीला पनि प्रफुल्लित भएकी थिई । “तेरै त चा“दी कटाइ छ मोरी † गर मस्ती । जा जा छिट्टो जा, दिनभरि छोड्नुपर्दा उसलाई कति गाह्रो भयो होला ?” उर्मिलाले उत्ताउलिएर भनेकी थिई ।
“नीला तिमी नहु“दा दिनभरि कस्तो शून्य भयो, तिमीस“ग छुट्टिएर बस्दा सारै नरमाइलो हु“दो रहेछ ।” आभासको मोटरतिर जा“दा नीलाले पनि आभासबाट यस्तो अपेक्षा गरेकी थिई । नीला मोटरको ढोका खोलेर भित्र बसिसकेकी थिई र आभासले एकपल्ट उसको अनुहारमा पुलुक्क हेरेर केही हा“स्न मात्रै खोज्यो र मोटर स्टार्ट ग¥यो । “हेर न, मिलनको औषधी सकिएको रहेछ । त्यसैले औषधी पनि किन्नुप¥यो र तिमीलाई पनि लिएर जानुप¥यो भनेर म आएको । हेमराजले तिमीलाई लिन भनेर गाडी स्टार्ट गरिसकेको थियो । त्यसै बेला मैले मिलनको औषधी किन्नुपर्ने कुरा सम्झे“ । उनीहरूलाई औषधी लिन पठाउ“दा अर्कै औषधी ल्याएर हैरान पार्छन् । त्यसैले मै आएको ।” आपूm आउनाको कारण आभासले खुलस्त पारेको थियो । भूmटै भए पनि “तिमीलाई लिन आएको” मात्र आभासले भनिदिएको भए नीलाको मनको अपेक्षाले भत्कनुको पीडा भोग्नुपर्ने थिएन ।
केहीअघि मात्र आभासलाई देख्दा नीलाभित्र उम्रिएका प्रफुल्लताका बिरुवाहरू हुर्किनै नपाई मरेका थिए । त्यसपछि उसले खुसी भएर आभासका अनुहारमा हेर्न पनि सकिन ।
पशुऔषधी पसलबाट आभासले औषधीहरू किनेर ल्यायो । नीला भने छेउ लगाइएको मोटरमै बसिरही ।
“मिलनलाई छ बजे नै औषधी खुवाउनुपर्ने, हेर न ढीलो भइसक्यो ।” आभासले नाडीघडी हेर्दै भनेपछि मोटरको स्पिड बढाएको थियो ।
उनीहरू घरपरिसरमा पुग्दा सा“झको अ“ध्यारोले छपक्कै छोप्न लागेको थियो । बिजुलीबत्ती बलिसकेको थियो । बिजुलीबत्तीको झलमल्लले रात परिसकेको सूचना दिइरहेको थियो ।
नीला थकाइले लखतरान भएर आÏनो कोठातिर लागेकी थिई भने आभास बिरालाको कोठाभित्र पसेको थियो । कोठामा पुगेर लुगा पनि नड्ढेरी नीला पलङमा डङरङ्ङ पल्टेकी थिई । आपूm यतिविधि थाकेको कुरा नीलालाई अड्ढिसमा थाहा थिएन । यस बेला उसलाई कसैस“ग नबोलू“ र चुपचाप सुतिरहू“जस्तो लागेको थियो । ऊ लखतरान परेकी थिई ।
“रानीसाहेब † राजाले चिया ज्यूनार गर्न बोलाइबक्सेको छ ।” दलबहादुरदाइको छोरो सुरेश कोठाको ढोकामा उभिएको थियो । नीला झन्नैझन्नै निदाउन लागेकी थिई । “ह“, के भयो ह“ ?” नीलाले आत्ति“दै सोधेकी थिई । उसले आपूm आउनाको कारण पुनः दोहो¥याएपछि नीला मन नभईनभई पनि यन्त्रचालित झै“ उठेर सुरेशको पछि लागेकी थिई ।
आभास बैठककोठामै एउटा सोड्ढामा बसेको थियो । त्यही“ नजिकै भुइ“मा मङ्गलमान बिरालो खेलाउ“दै थियो ।
नीला पुग्दा नपुग्दै दलबहादुर दाइ चियाको सर्दाम बोकेर उपस्थित भएका थिए । सधै“ झै“ चिया नीलाले नै बनाएकी थिई । चिया बनाउ“दा बनाउ“दै उसको ध्यान आÏनो कपडामा गएको थियो । ऊ अझसम्म अड्ढिसकै युनिड्ढर्ममा थिई । “नीला तिमीले किन लुगा नड्ढेरेको †” अब आभासले सोध्नेछ । ऊ सम्भावित जवाड्ढ खोजेर पर्खिरही, तर आभासले सोधेन≤ अह“ राम्रोस“ग हेर्दा पनि हेरेन । दुवैले चिया पिइरहे । त्यसपछिको समय गह्रु“गो भएर बितेको थियो । आभास त्यसैबेला टेलिभिजनको आपूmलाई मनपर्ने जियोग्राड्ढिकल च्यानल खोलेर मस्त भएको थियो । नीलाले आपूmलाई पनि त्यही च्यानलमा डुबाउने प्रयत्न गरेकी थिई, तर ऊ निरर्थक भई । एकनास टेलिभिजन हेरिरहेको आभासलाई उसका आ“खा छलेर नीलाले हेरेकी थिई । उसमा कुनै परिवर्तन थिएन ।
हिजोको आभास र आजको आभासमा रत्तीभरको पनि परिवर्तन देखि“दैन । तर किन नीलालाई आभास अर्कैजस्तो लागिर≈यो≤ एकदमै पराईजस्तो आभास देखी उसले ।
“नीला † जिन्दगीको यस मोडमा तिमी मेरो साथ हु“दा मलाई जिन्दगी सारै रमाइलो लागेको छ । अब तिमीविनाको जीवनको कल्पना पनि म गर्न सक्तिन“ ।” त्यसै बेला आभासले भनेजस्तो लाग्यो नीलालाई । उसले आभासलाई ठह¥याउने गरी हेरी । तर आभास भने टेलिभिजनमा देखाइएका जनावरहरूमै डुबेको थियो । टेलिभिजनको आवाजबाहेकको त्यो समय निःशब्द थियो र त्यस समयले दिएको पीडाबाट आहत नीलाको अबचेतनको क्रन्दनले नीला बिथोलि“दै गएकी थिई ।
आभासको आपूmप्रतिको पलायनलाई नीलाले खप्न सकिन । त्यसैले ऊ त्यहा“बाट उठेर हि“डेकी थिई । “नीला † यही“ बस न, तिम्रो अनुपस्थितिमा यो टेलिभिजनको कुनै आकर्षण हुनेछैन ।” आभासले नीलाको हात च्याप्प समातेर उसलाई आपूmस“गै बसालेको कल्पना पनि नीलाले गरी, तर यो पनि उसको कल्पना मात्रै र≈यो । आÏनो कल्पनाप्रति लालायित हु“दै नीला थाकेको गतिमा अन्ततः त्यहा“बाट हि“डेकी थिई । आÏनो तुहेको अपेक्षाको बोझले गलेकी नीलाले जा“दाजा“दै पनि आभासलाई हेरेकी थिई, तर आभासले टेलिभिजनबाट आ“खा अलिकति पनि नीलातिर ड्ढर्काएको थिएन । त्यसबेला नीलालाई लाग्यो, आभासलाई ऊ हुनुको र नहुनुको खास अर्थ रहेनछ ।
“रानीसाहेब, यति थोरै किन ज्यूनार गरिबक्सेको ? मीठो भएन कि ?” त्यस बेलुकी दलबहादुर दाइले नीलालाई सोधेका थिए । “होइन दलबहादुर दाइ, आज मलाई भोक नै छैन ।” नीलाले जवाड्ढ दिएकी थिई । “दलबहादुर दाइ, मिलनलाई दूध ठीक पार त । उसलाई औषधी खुवाउनेबित्तिकै दूध खुवाउनुपर्छ । बिहानको भन्दा अलि बढी हाल्नू है † त्यो भोकायो पनि होला ।” आभासले आपूmले खा“दाखा“दै दलबहादुर दाइलाई निर्देशन दिएको थियो ।
“नीला, तिमीले किन यति थोरै खाएकी † तिमीले नखाए म पनि खान्न“≤ कि तिमीलाई सन्चो छैन ? चेहरा पनि मलिन देख्छु ।” नीलाको कुण्ठित अपेक्षा अझै पनि आभासको उसप्रतिको समर्पणको भोकमा थियो । तर दलबहादुर दाइले भनेका शब्दहरूको सत्य जा“च गर्ने चाहना पनि आभासले यथार्थमा लिएको थिएन । उसले नीलाका थालतिर हेर्दा पनि हेरेन । लामो बसयात्रामा यात्रा गर्ने विविध दिशाका यात्रुहरूले कुनै होटलको एउटै टेबुलमा खाना खाए जसरी नै त्यस बेला उनीहरूले पनि खाएका थिए ।
नीला खाना खाएपछि सुत्ने कोठातिर लागी भने आभास बिरालाको कोठातिर लागेको थियो ।
“तिमी निदायौ ?” विगत रातहरूको अनिद्राले गर्दा पनि नीला त्यस रात सा“च्चै नै निदाइसकेकी थिई । आभासले अ“गालोमा बेरेको क्षण ऊ बिउ“झिन पुगेकी थिई । नीलाको अपेक्षा ढीलै भए पनि पूरा गर्न आइपुगेको आभासका बलिष्ठ पाखुरालाई उसले ह्दयबाट नै स्वागत गरी । यति दिनदेखि आभासका विरुद्ध आपूmभित्र पलाएका विचारहरूलाई पनि उसले त्यसै बेला लघारेकी थिई । नीला धेरै दिनपछि आभासको बाहुपाशमा निर्धक्क हुन खोज्दै थिई । उसको हराएको स्वर्णिम सुख ऊ नजिक आउन लागेको थियो ।
“म्याउ“ † म्याउ“ † म्याउ“ † म्याउ“ †”
प्राप्तिको नजिक नजिक पुग्न लागेका बखत बिरालाको आवाजले आभास नीलाबाट अलग्गियो । आकाशको माथिल्लो सतह छुन लागेको चङ्गा चु“डिएको अनुभूतिले मर्मान्त भई नीला । भोकाएको बेला मुखमा हालिसकेको गा“स थुतिएझै“ भयो उसलाई । “एकैछिन है, मिलनलाई के भयो ?” बिरालाको पलङतिर हानि“दै आभासले भनेको थियो । कोठाको ठूलो बत्ती बालेर आभास बिरालोमा केन्द्रित भएको थियो ।
अप्राप्तिजन्य पीडाको मर्मले छटपटिएकी नीलाले आभासलाई नजाऊ भनेर रोक्न पनि सकिन र ऊ गएको सत्यलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्न पनि सकिन । आÏनै शरीरको जलन र मनको आगाको Âापमा नीला छटपटिइरही मात्रै ।
“हेरन, आÏनी आमाको सम्झना आयो होला त्यसलाई । यत्तिकै कराएको रहेछ, दूधदानी मुखमा हालिदिए“, अहिले चुसेर सुतेको छ ।” आभासले आपूmलाई पूर्वअवस्थामा पु¥याउने प्रयत्न गर्दै भनेको थियो ।
बिजुलीद्वारा सञ्चालित अटोमेटिक मेसिन जस्तै ऊ तुरुन्तै आÏनो पूर्वक्रियामा जुटेको थियो तर नीलाले आपूmलाई कसै गरे पनि पूर्व अवस्थामा पु¥याउन सकिन ।
एक्लो आनन्दप्राप्तिपछि आभास एकैछिनमा मस्त निद्रामा पुगेको थियो र नीला भने अप्राप्तिको दाहमा रातभरि भतभती सल्किरही । थाहा छैन रातको पछिल्लो पहरमा पनि ऊ कतिखेर निदाई †